UCharmlite uhambele umcimbi we-127th Canton Fair oqale kusuka ku-15th, NgoJuni bese iphela ngomhla ka-24th, NgoJuni. Kukhetheke kakhulu ngoba iCanton Fair, eyaziwa nangokuthi iChina China and Export Fair, yathuthelwa efwini okokuqala selokhu yasungulwa eminyakeni engama-63 eyedlule.
Lo mcimbi, uCharmlite ulungiselele ukwethulwa kwevidiyo yolimi lwesiNgisi emikhiqizweni emisha, wanikela ngokusakazwa bukhoma njalo futhi wasebenzisa ubuchwepheshe bangempela bangempela ukubonisa izimpahla ukuheha izivakashi kulesi sikhathi sokuqala.
Amakhasimende amasha avela emazweni anjengeRussia, iJalimane, iMexico, iTurkey ne-ect ayenesidingo esiqinile semikhiqizo yethu eseqophelweni eliphezulu. I-Charmlite inefektri yethu yobungcweti ene-BSCI, iDisney Fama, i-BSCI, i-CFA yokuhlolwa kwefektri, futhi inebhizinisi lemikhiqizo emikhulu, iCoca cola, iFanta, iPepsi, iDisney, neBacardi. Lapha sikukhombisa ezinye izithombe njengoba zingezansi ngemiklamo eyengeziwe yokuncintisana, izimfanelo namanani entengo, njengezinkomishi zegceke lephathi, izingilazi zewayini epulasitiki, amabhodlela amanzi, izinkomishi ze-PP, izinkomishi zekhofi kanye namabhange zemali. Kufanele bathole ukwamukelwa okuhle kakhulu emakethe yakho futhi bakusize ukhulise ibhizinisi lakho.
UCharmlite ungene ku-127th Canton Fair online akuyona nje indlela ebalulekile yokubhekana nezinselelo ezilethwe yi-COVID-19, kodwa futhi ukhombisa ukuzimisela kweCharmlite ukusimamisa wonke amabhizinisi ethu.
Isebenzisa ngokugcwele ubuchwepheshe bolwazi kubandakanya i-inthanethi, idatha enkulu, amafu ekhompyutha nobunhloli bokufakelwa, i-Canton Fair yalo nyaka ikhombise indlela entsha yokubambisana ezinkampanini zangaphandle nezasekhaya futhi nokuzethemba okuphefumulelwe kokuthola amathuba phakathi nezinselelo.
Ukwenza lula ukuqonda kwakho okungcono kweCharmlite, sicela uthole isithombe sethu se-booth ngonyaka owedlule wesikhumbuzo.
Siyethemba ngokweqiniso ukuthi uzoba nathi! Masenze imikhiqizo eyimpumelelo ngaphezulu!